कपिलवस्तुबाट देखिने बायुमण्डलमा एक्कासी के भयो ? आए यस्ता तस्विर « Mayadevi Online News Portal
कपिलवस्तुबाट देखिने बायुमण्डलमा एक्कासी के भयो ? आए यस्ता तस्विर
प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७७ आईतवार ०८:२२
कपिलवस्तुबाट देखिने बायुमण्डलमा एक्कासी परिवर्तन आएको छ । आज विहानैबाट बायुमण्डल अरु दिनमाजस्तो देखिएन ।
अरु दिनमा भन्दा निकै भिन्न र अनौठो खालको देखिएको भनेर सामाजिक संजालमा बिभिन्न तस्विरहरु पोष्ट भएका छन् । बायुमण्डलमा प्रदुषण हो या अरु विज्ञले केही बताएका छैनन् । तर देशभर प्रदुषणको मात्रा बढेपछि धेरैले त्यही हो कि भनेर चिन्ता मानेका छन् ।
शैक्षिक व्यक्ति जगत् राज रेग्मीले आज चैत्र २२ गतेको बातावरण धुँवाको कारण अधिकतम प्रदुषित छ भनेर लेख्दै तस्विर आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ ।
बाणगंगाकी वन लेडी रेनु सेनले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा बायुमण्डलको प्रत्यक्ष असर भन्दै फोटो सामाजिक संजाल फेसबुकमा राख्नु भएको छ ।
यस्तै धेरैले मौसम के भएको भनेर फोनमार्फत मायादेवी अनलाइनसंग जिज्ञासा राखेका छन् । यस विषयमा बुझ्दा विज्ञहरुले प्रदुषणको कारण यस्तो भएको हुन सक्ने बताएका छन् । प्रदुषण बढेपछि चिकित्सकले बाहिर जाँदा चस्मा लगाउन, मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन् ।